Oha obodo | Site na Linux
The free software obodo mejupụtara nke free software ọrụ na mmepe, nakwa dị ka ndị na-akwado nke free software ngagharị. Ihe ndị a bụ (ezughị ezu) ndepụta nke obodo a na ndị isi otu nwere ya.
1.9 Eke Argentina (PyAr)
2.5 Otu Ndị Ọrụ Linux (Spain)
3.4 Otu Ndị Ọrụ Linux - Mexico
5.1 Otu Paraguay Linux User Group
6.2 Otu Onye Ọrụ Linux - Uruguay
7.2 Peru Linux Onye Ọrụ Otu
8.4 Ndị ọrụ Linux - Chile
8.5 Obodo ndi ozo
10.1 Ecuador nke Ubuntu
10.2 Otu Njikwa Linux - Ecuador
12.2 Otu Ndị Ọrụ Linux - Central America
USLA na-anọchi anya "Ndị Ọrụ Sọftụwia Na-enyeghị Aka nke Argentine". Enwere ike ịsị na ọ bụ "nne" nke ụlọ ọrụ ngwanrọ niile dị na Argentina. Ọ na-eweta Usertù Ndị Ọrụ Ngwá Ọrụ Free na òtù dị iche iche, n'etiti ndị a bụ ndị akọwapụtara n'okpuru.
Ndị ọrụ ndị ọzọ bụ:
CaFeLUG: Otu ndị ọrụ Linux nke Federal Capital.
Ekele: Cordoba Linux Ọrụ Group.
Linux Santa Fe: Linux ọrụ otu na Santa Fe.
LUGNA: Otu ndị ọrụ Linux na Neuquén.
gulBAC: Otu ndị ọrụ Linux nke Centre nke Prov. Of Bs.
LUGLi: Free Software ọrụ otu nke Litoral.
Gugler: Otu onye ọrụ Entre Ríos.
ỤLỌ: Mendoza Free Ngwá Ọrụ Ndị Ọrụ.
LANUX: Lanús Linux ọrụ otu.
Ndi SOLAR Free Software Argentina Civil Association hiwere na 2003 site na ndi otu ndi oru ngwanrọ na Argentina. Ebumnuche ya bụ ịkwalite uru teknụzụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke ụkpụrụ na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke sọftụwia n'efu na ọdịbendị n'efu, na -emepụta oghere maka nnọchite na nhazi nke ndị mmadụ, obodo na ọrụ. Isi ọrụ ya metụtara mgbasa nke Software na-akwụghị ụgwọ na ọkwa steeti, na ngalaba mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
SoLAr na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ gọọmentị nke mba dị ka INADI (National Institute megide Discrimination, Xenophobia and Racism), INTI (National Institute of Industrial Technology), ASLE (Spepe nke Free Software na steeti), obodo na mahadum si Argentina.
Fundación Vía Libre bụ nzukọ ndị nkịtị na-enweghị uru tọrọ ntọala n'obodo Córdoba, Argentina, nke kemgbe 2000 gbasoro ma kwalite ebumnuche nke ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ ma tinye ha na mgbasa ozi n'efu na ihe ọmụma na ọdịbendị. N'ime ọrụ ya dị iche iche bụ ịgbasa Free Software na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, azụmahịa, agụmakwụkwọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Otu oru ya kachasi mkpa bu mmekorita ya na ndi oru nta akuko na igbasa ihe ndi na-eme ka a mata ihe banyere ya.
Ọ bụ ụlọ ọrụ Argentine nke Free Software Companies. Ọ bụ kpọmkwem otu ụlọ ọrụ (ndị ọkachamara nọọrọ onwe ha –monotributistas kpọmkwem – esonyeghị n’usoro iwu CAdESoL) nke dabere na Argentine Republic wee tinye aka na ebumnuche nke CAdESoL na ụdị azụmaahịa sọftụwia n'efu. Iji sonye, ​​ụlọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị nkwado nke ndị isi njikwa ya.
Gleducar bụ ọrụ agụmakwụkwọ n'efu nke pụtara na Argentina na 2002. Na mgbakwunye, ọ bụ ndị otu obodo na-arụ ọrụ n'ọhịa agụmakwụkwọ na teknụzụ.
Gleducar bụ obodo nwere onwe ya nke ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ na ndị mmuta mmụta jikọtara ya site na mmasị ndị mmadụ na-arụ na mkpokọta, njikọta ihe ọmụma na nkesa ya n'efu.
Ihe oru ngo a na aru oru n’iru okwu di iche iche dika ihe omuma, mmuta amara, mmuta ihe omimi, imekota ihe omuma, teknụzụ ohuru ohuru ma kwalite iji ngwanrọ eji eme ihe n’ulo akwukwo dika ihe omumu ihe omuma na ihe omuma, ebe o nwere ebum n’uche. mgbanwe na nhazi nke mmeputa, ihe owuwu na igbasa nke ihe omumu.
Ihe mejuputara ya bu ndi ulo akwukwo a haziri ahazi, nke emere dika NGO (otu ndi obodo) nke na emegharia uche na ebumnuche nke obodo.
BuenosAiresLibre, nke a makwaara dị ka BAL, bụ otu ndị raara nye iji mepee ma jigide netwọkụ dijitalụ nke obodo na Buenos Aires (Argentina) na gburugburu ya site na iji teknụzụ ikuku (802.11b / g). Ọ nwere ihe karịrị 500 ọnụ na-ekwupụta ozi na oke ọsọ.
Ebumnuche nke BuenosAiresLibre bụ ịhazi netwọkụ data data na obodo na Buenos Aires na gburugburu ya dị ka onye na-enweghị ego iji nye ọdịnaya, n'etiti ngwa ndị ọzọ metụtara obodo. Tinyere ọdịnaya ndị ọzọ, netwọkụ gụnyere Wikipedia na Spanish. A na-enyere mgbasa nke netwọk aka na mgbasa na ọrụ ọzụzụ, nke ha na-akụzi otu esi agbakọta antenna na ihe ndị a na-eme n'ụlọ. BuenosAiresLibre na-emepe netwọkụ a site na iji ngwa ngwanrọ n'efu
Tọrọ ntọala na 1st. Septemba 2007, Wikimedia Argentina bụ mpaghara mpaghara nke Wikimedia Foundation. Ọ na-arụ ọrụ na mgbasa, nkwalite na mmepe nke ihe ọdịbendị n'efu, ọkachasị na mgbasa nke ọrụ metụtara Wikimidia dịka Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikinews, na ndị ọzọ. Na 2009, ọ bụ otu na-ahụ maka ịhazi Wikimanía 2009 na Buenos Aires.
Mozilla Argentina bụ ndị mgbasa ozi maka ọrụ Mozilla Foundation na Argentina. Ha raara onwe ha nye nke oma igbasa ojiji nke mmemme efu nke Mozilla weputara site na nhazi na isonye na mmemme dị iche iche.
Eke Argentina (PyAr)
Python Argentina bụ otu ndị nkwalite na ndị mmepe nke asụsụ mmemme Python na Argentina. Ọrụ ya gụnyere mgbasa site na okwu na nzukọ, yana mmepe nke ọrụ dabere na Python na PyGame ma ọ bụ CDPedia, ụdị Wikipedia na Spanish na DVD.
Uuntu-ar bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Argentina, raara nye ịgbanwere ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemu a.
Ebumnuche ya bụ ịgbasa uru nke Ubuntu na ihu igwe, ebe a nabatara echiche nke ndị ọrụ niile iji melite sistemụ arụmọrụ a. Ọzọkwa, na saịtị ha ị ga-ahụ ngwaọrụ ndị dị mkpa iji bido Ubuntu, dozie nsogbu ma ọ bụ naanị gbanwere echiche.
Obodo GNU Spain. N'ebe a ị ga-ahụ ọtụtụ ozi gbasara GNU Project na ngwanrọ ngwanrọ n'efu: ikikere, ebe ịchọta na ibudata ngwanrọ GNU, akwụkwọ, nkà ihe ọmụma, akụkọ, na obodo.
Ebumnuche bụ isi nke National Federation of Free Software Companies ASOLIF (Federated Free Software Associations) bụ iji chebe ma kwalite ọdịmma nke ụlọ ọrụ azụmaahịa ngwanrọ n'efu na Teknụzụ na ahịa ọrụ, site n'ọgbọ na / ma ọ bụ nkwado nke oru ngo, yana nhazi nke atụmatụ iji jiri usoro azụmaahịa Free Software, iji nweta ọgbọ nke akụnụba n'ụzọ dị mkpa.
Tọrọ ntọala na mbido 2008, ASOLIF taa na-achịkọta karịa ụlọ ọrụ 150 kesara na mkpakọrịta mpaghara 8, nke mere ka ọ bụrụ onye na-eduga ndị ọrụ azụmaahịa na-akwụghị ụgwọ na Spain.
CENATIC bụ State Public Foundation, nke Ministri nke Mmepụta, Njem Nleta na Azụmaahịa na-akwalite (site na Isi nke Nkwukọrịta na maka Ozi Ọha na ọha na eze Red.es) na Junta de Extremadura, nke nwekwara ndị nlekọta ya na obodo kwụ ọtọ nke Andalusia, Asturias, Aragon, Cantabria, Catalonia, Balearic Islands, Basque Country na Xunta de Galicia. Companieslọ ọrụ ndị ahụ Atos Origin, Telefónica na Gpex bụkwa akụkụ nke Board of CENATIC.
CENATIC bụ naanị ọrụ ngo gọọmentị nke Spain iji kwalite ihe ọmụma na ojiji nke ngwanrọ mepere emepe, n'akụkụ niile nke ọha mmadụ.
Oru nke Foundation ahụ bụ ịkwado onwe ya dị ka etiti nke ịdị mma mba, yana amụma mba ụwa na Europe na Latin America.
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Mexico, raara nye ịgbanweta ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere usoro a dabere na debian GNU / Linux.
Otu Ndị Ọrụ Linux (Spain)
AsturLinux: Otu ndị ọrụ Linux Asturian.
ỌGWU: Otu ndị ọrụ nke Castilla y Leon.
BULMA: Beginners Linux ọrụ si Mallorca na gburugburu.
GLUG: Otu ndị ọrụ Linux nke Galicia.
GPUL-KWUKWU: Linux Users and Programmers Group - Coruña Linux Ọrụ Ndị Ọrụ.
GUL (UCRM): Otu onye ọrụ nke Mahadum Carlos III, Madrid.
GULIC: Otu ndị ọrụ Linux nke Canary Islands.
HispaLinux: Association nke Spanish Linux Ọrụ.
IndaLitux: Almeria Linux Ọrụ Ndị Ọrụ.
Lilo: Linuxeros Locos - Mahadum nke Alcalá de Henares.
VALUX: Association nke ndị ọrụ Linux nke obodo Valencian.
Obodo GNU Mexico. N'ebe a ị ga-ahụ ọtụtụ ozi gbasara GNU Project na ngwanrọ ngwanrọ n'efu: ikikere, ebe ịchọta na ibudata ngwanrọ GNU, akwụkwọ, nkà ihe ọmụma, akụkọ, na obodo.
Mozilla Mexico bụ otu mgbasa maka ọrụ ngo Mozilla Foundation na Mexico. Ha raara onwe ha nye nke oma igbasa ojiji nke mmemme efu nke Mozilla weputara site na nhazi na isonye na mmemme dị iche iche.
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Mexico, raara nye ịgbanweta ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemụ arụmọrụ a.
Otu Ndị Ọrụ Linux - Mexico
Nchịkọta Ndị Ọrụ Linux - Chihuaha (GLUCh)
Otu Onye Ọrụ Linux - Baja California Sur (GULBCS)
Nchịkọta Ndị Ọrụ Linux - Ensenada (ELUG)
Ọ na-ejikọ mahadum, ndị ọchụnta ego, gọọmentị, otu ndị ọrụ, ndị na-egwu egwu, ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị na ndị na-eme ihe maka nnwere onwe nke ihe ọmụma. Ebumnuche ya bụ ịkwalite ojiji na mmepe nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dịka ihe ọzọ maka nnwere onwe akụ na ụba na teknụzụ.
Otu Paraguay Linux User Group
O nwere ọgbakọ, ndepụta nzipu ozi, enyo sọftụwia na-akwụghị ụgwọ (.iso nkesa na mmelite), nnabata nke ọrụ mba, enyo nke saịtị akwụkwọ (tldp.org, lucas.es), yana nhazi Linux InstallFests ndị otu dị iche iche haziri. . Na mgbakwunye, o nwere wiki maka ọrụ na akwụkwọ ndị ọrụ zitere.
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Uruguay, raara nye ịmekọrịta ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemụ arụmọrụ a.
Otu Onye Ọrụ Linux - Uruguay
Ọ bụ otu ndị ọrụ Uruguay nke ndị ọrụ GNU / Linux maka kọmputa. Ebumnuche ndị otu a bụ ịgbasa ojiji na ebumnuche nke GNU / Linux na Free Software yana ịbụ ebe ịgbanwere ọ bụghị naanị ihe ọmụma teknụzụ, kamakwa echiche banyere nkà ihe ọmụma nke na-akwado Free Software, Code Mepee Isi mmalite na ihe ndị yiri ya.
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dabere na Peru, raara nye ịgbanweta ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemụ arụmọrụ a.
Peru Linux Onye Ọrụ Otu
Ebumnuche otu a bu igbasa sistemụ Linux, kwalite iji ya na nkuzi ya; yana ịkwado mmepe nke OpenSource na mba ahụ.
PLUG anaghị achụ ego ọ bụla, kama naanị ijere obodo Linux nke Peru ozi. Ikekọrịta n'ime otu ahụ meghere nye mmadụ niile na ụlọ ọrụ dị njikere ijikọ na ebumnuche na ebumnuche nke otu a.
Obodo GNU Chile. N'ebe a ị ga-ahụ ọtụtụ ozi gbasara GNU Project na ngwanrọ ngwanrọ n'efu: ikikere, ebe ịchọta na ibudata ngwanrọ GNU, akwụkwọ, nkà ihe ọmụma, akụkọ, na obodo.
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Chile, raara onwe ha nye ịgbakọ ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemụ arụmọrụ a.
Mozilla Mexico bụ otu mgbasa maka ọrụ ngo Mozilla Foundation na Chile. Ha raara onwe ha nye nke oma igbasa ojiji nke mmemme efu nke Mozilla weputara site na nhazi na isonye na mmemme dị iche iche.
Ndị ọrụ Linux - Chile
AntofaLinux: Otu ndị ọrụ Linux nke Antofagasta.
UCENTUX: Linux Users Group nke Central University, Metropolitan Region.
CDSL: Centerlọ Ọrụ mgbasa Software na-akwụghị ụgwọ, Santiago.
GULIX: Linux Users Group nke IX Region.
GNUAP: Linux Grouptù Ndị Ọrụ nke Mahadum Arturo Prat, Victoria.
GULIPM: Otu ndị ọrụ Linux nke Puerto Montt.
Obodo ndi ozo
Okwo Chi nke Debian, Ọwa Chile.
Desktop gburugburu: GNOME Chile, KDE Chile.
Ndị ọrụ teknụzụ na-akwụghị ụgwọ (Cuba), nke akpọrọ GUTL, bụ Community nke ndị na-anụ ihe na OpenSource na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ n’ozuzu ha.
Obodo Mozilla na Cuba. Ntọala ma duzie ndị otu Mahadum nke Mahadum Kọmputa nke Cuba.
Ecuador nke Ubuntu
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Ecuador, raara nye ịgbanweta ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemụ arụmọrụ a.
Otu Njikwa Linux - Ecuador
Portal raara nye agbasa ojiji na ideals nke GNU / Linux na Free Software, na-enye ọrụ na ozi metụtara GNU / Linux usoro.
Otu ndị ọrụ GNU nke Venezuela bụ otu lekwasịrị anya na inye na ikwusa na nkà ihe ọmụma na atụmatụ nke ọrụ GNU na FSF (Free Software Foundation) na Venezuela site na mmepe, na ojiji, nke mmemme, mbipụta na akwụkwọ dabere na ngwanrọ n'efu.
Ọ bụ otu ndị ọrụ Ubuntu, nke dị na Venezuela, raara nye ịgbanweta ahụmịhe na ịkekọrịta ihe ọmụma banyere sistemu a dabere na debian GNU / Linux.
Venezuela Linux Users Group (VELUG) bụ nzukọ na-enye ohere ịnweta ozi buru ibu metụtara usoro GNU / Linux na Free Software.
Ndị otu anyị na-emepụta ọtụtụ ihe na listi nzipu ozi. Ihe oru teknụzụ niile, nsonaazụ ajụjụ na azịza ndị a gbanwere na VELUG, dị na ebe akụkọ akụkọ ihe mere eme nke ndepụta nzipu ozi.
Revolutionary Front nke Free Technologies (FRTL) bụ akụkụ aka ekpe, gbadoro anya maka mgbasa, nkwalite na ojiji nke teknụzụ n'efu na obodo n'ozuzu, n'ịchọ ịkekọrịta na ịgba ume ịtọhapụ ihe ọmụma na onyinye maka ikike teknụzụ enyere. na Atụmatụ nke ala nna site na echiche mmadụ na mpaghara nke mmekọrịta mmadụ na narị afọ nke iri abụọ.
The Free Software Central America obodo (SLCA) bụ ebe nzukọ maka iche iche a haziri ahazi na-arụ ọrụ maka mmepe na mgbasa nke ngwanrọ n'efu na Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica na Panama.
Anyị ezukọtawo iji kwurịta okwu, sonyere ndị agha, kesaa ihe ọmụma na ahụmịhe; na nke kachasị, ịkwalite mgbanwe na ọha mmadụ ebe nnwere onwe ngwanrọ na-enye aka n'ọgbọ na ịkekọrịta ihe ọmụma n'efu.
Otu Ndị Ọrụ Linux - Central America
GULNI: Linux Ọrụ Group na Nicaragua
GULCR: Linux Ọrụ Group na Costa Rica
GUG: Otu ndị ọrụ Unix na Guatemala
SVLinux: Linux Ọrụ Group na El Salvador
The Free Software Foundation bụ nne nke ALL Free Software òtù ma ọ bụ Richard M. Stallman kere ya iji kwụọ ụgwọ ma kwado ọrụ GNU. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-etinye n'aka ndị ọrụ sọftụwia Free Software ọtụtụ ọrụ maka obodo iji zụlite ma na-arụpụta ihe.
E nwere òtù ndị ọzọ metụtara Free Software Foundation, nke na-ekerịta otu ebumnuche ma na-arụ ọrụ ha na mpaghara ma ọ bụ mpaghara ụwa. Otu a ka odi Ntọala sọftụwia efu na Europe, na Free Software Foundation Latin America na Free Software Foundation India.
Ndi otu ndi otu a na akwado GNU Project dika otu ulo oru Free Software Foundation si eme.
Ọ bụ nzukọ na-enweghị uru dabere na USA, onye ọrụ ya bụ ịhazi Freedombọchị nnwere onwe sọftụwia gburugburu ụwa. Ndị ọrụ niile wepụtara oge ha.
OFSET bụ nzukọ na-enweghị uru nke ebumnuche ya bụ ịkwalite mmepe nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ maka usoro agụmakwụkwọ na nkuzi n'ozuzu ya. A na-edebanye aha OFSET na France mana ọ bụ nzukọ ọdịbendị nwere ọtụtụ ndị otu si n'akụkụ ụwa niile.
You ma nzukọ ọ bụla dị mkpa yana / ma ọ bụ obodo metụtara sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ na-ekwughị aha ya? Zitere anyị nke gị nkwanye.